Aroos (; ) waa dhacdo dabaaldega midowga labo qof ku galayaan guurka. Sida caadiga ah, aroosku waa xaflada iyo damaashaadka wakhtiga ay dhacayso meherka iyo wixii damaashaad iyo farxad ah ee la xidhiidha. Nidaamka iyo dhacdada aroosku waa mid ay ku kala duwan yihiin bulshada caalamku taasi oo ku xidhan dhaqanka, caadada, diinta, wadanka, bulshada iyo heerka darajada dhaqaale ee lamaanaha. Aroosyada badankooda waa dhacdooyin farxad leh.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Aroos&oldid=218283"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Oktoobar 2021, marka ee eheed 11:26.